Esihlokweni sethu esithi "Isikhumba Esisithombeni Ngemva Kokulahlekelwa Kokulinganisela Kwemithi" sizokutshela ukuthi, emva kokulahlekelwa isisindo, gwema ukugwedla isikhumba. Ukudla konke kunomgomo owodwa, ukuzuza isibalo esihle. Akekho umuntu ongathanda ukushintsha amafolda emanzini esikhumba esiluliwe. Kumele kuqashelwe ukuthi uma ngokungazelelwe ulahlekelwe amafutha amanengi, ungakhohlwa ukuthenga isibalo esithakazelisayo, nesifo se-flabby ne-saggy. Inkathazo enjalo ngokuvamile ivela nabesifazane abangaphezu kuka-30, isikhumba sabo asinjengokunwebeka njengasesebasha, akusilo kakhulu, sesivele sibonakala esikhumbeni sobuso, izandla, intamo, ngaphakathi kwamathanga nasesikhumba sesisu.
Ingabe ipoplasty izosiza ekuxazululeni le nkinga? Abahlinzayo basePlastiki bazokwazi ukususa isikhumba esiphezulu. Kodwa odokotela abaningi ochwepheshe bayeluleka ukuthi bangenzi isisindo ngokushesha, futhi ngemva kokulahlekelwa isisindo, bahlushwa iminyaka eyodwa noma emibili, ngoba phakathi nalesi sikhathi umzimba usebenza ukusebenzisa imithombo yawo yemvelo ukuqinisa isikhumba. Udinga ukwazi ukuthi ukusebenza okunjalo kubiza kakhulu, futhi kuhlotshaniswa nengozi ethile.
Kunezimo lapho isimo ngaphandle kokuhlinzwa singakwazi ukulungiswa, kodwa kungcono ukuletha lokhu kuze kube iphuzu, khumbula imithetho elula:
- Kudingeka ulahlekelwe isisindo kancane kancane. Phela, amaphilisi engeziwe awazange abonakale manje, futhi ukuwaqeda, kumele kudlule isikhathi esithile. Ngokuvamile isifiso esinjalo sokubuyela masinyane evamile, kodwa kungcono kulezi zimo ukuba ungasheshi. Odokotela bayeluleka isonto ukuba bangalahleki ngaphezu kwengxenye kilogram kuya kilogram. Ngoba ukulahlekelwa kwesisindo esisheshayo ngeke kuzuze, kodwa kuyingozi nje kuphela, ngoba ngaphakathi kunzima ukuhlala isikhathi eside. Abantu abaningi banesisindo futhi futhi ngezinye izikhathi ngisho nangaphezulu.
- Unganamatheli "ukudla okunzima". Imikhawulo eqinile kuphela ekudleni kungabangela ukugaya isikhumba.
- Ngesikhathi sidlo ngasinye, sidla amaprotheni (imikhiqizo yobisi, inhlanzi, izinkukhu, inyama).
- Ukudla okungekho amafutha amancane, lokhu akusikho kuwe. Uma usuku lokusebenzisa inani elanele lamanoni angaphansi kuka-30 amagremu, khona-ke kuzoholela esikhunjeni esomile nokulahlekelwa ukuqina kwawo. Kuzoba usizo ukuqeda amafutha angasetshenzisiwe (amantongomane, inhlanzi, amafutha emifino kanye nabanye).
- Ukuzivocavoca - ukugijima ekuseni, ukuqina komzimba kuzohola isikhumba kanye nemisipha yezindawo ezinenkinga ngokulandelana. Kufanele uvakashele iklabhu yokuzivocavoca noma ukuvocavoca kabili noma kathathu ngesonto. Futhi, ukwenza izivivinyo zamandla nama-dumbbells noma ama-simulators, kuzokusiza ukuthi uthathe indawo yamathambo akho ngamafutha.
- Ukusebenzisa inani elidingekayo liketshezi, kuzovumela ukugcina ukulinganisela kwamanzi esikhumbeni ezingeni elifanele, ngoba isikhumba esithuthukisiwe sihlala sinciphile.
- Ukuphambana noma ukugeza okubandayo kuzosiza ukugqugquzela ukujikeleza kwegazi.
- Ukugeza ngamanzi ashisayo ngokungezwa kolwandle usawoti kungasusa emzimbeni umzimba.
- Uma ukucubungula nsuku zonke, kuzosiza ukuvuselela isikhumba, khona-ke amangqamuzana endala esikhumba azonqamuka, futhi isikhumba "esisha" sizobe sisezingeni eliphansi futhi lincane.
- Sebenzisa zonke izinsuku zokudla noma ezithuthumayo, ikakhulukazi, zisetshenziswe kahle emva kokuhlunga.
- Umphumela omuhle uhlinzekwa yizinqubo ezinjalo zokuzithokozisa njenge-wraps ne-massage, ezingavimbela ukugaya isikhumba.
Yehlisa isisindo kancane. Isikhathi esingakanani owadinga ukuthola amakhilogremu angaphezulu, ngoba awazange aqoqe ngesonto elilodwa. Kungani ufuna ukulahlekelwa lawo maphilisi ngesonto elilodwa? Ukulahleka kwesisindo ngokushesha kuyingozi kakhulu empilweni. Ngemuva kokulahlekelwa kwesisindo esisheshayo abantu abakwazi ukugcina isisindo sifike isikhathi eside futhi sithola isisindo, sibhekene nobunzima obunjalo.
- I-Hyaluronic acid itholakala esikhumbeni sethu. Ukwandisa ukuqina, ukubuyisela izinga lokulinganisela kwamanzi, kusiza ukuzivuselela kwesikhumba, kugcina unomsolo emangqamuzaneni esikhumba futhi kuwugcine. Ngokuhamba kwesikhathi, inani lazo ezinhlobonhlobo liyancipha, kunengqondo njengezithako zokudla ukuze zithathe. Isidalo senza i-hyaluronic acid ngamanani amancane futhi idinga i-magnesium yalokhu. Ukwandisa ukuhlanganiswa kwe-hyaluronic acid, udinga ukuthatha i-vitamin-mineral complex nsuku zonke nge-magnesium.
Manje siyakwazi ukuvimbela isikhumba sagging ngemuva kokulahlekelwa isisindo esisheshayo. Sifika ama-kilogram amaningi ngokweqile kancane kancane. Unganamatheli ezidlweni ezikhuni eziholela ekusenikeni kwesikhumba. Sisebenzise izikhathi ezimbili noma ezintathu ngesonto ngamagymnastics emandla, samukela umehluko noma ishazi ebandayo kanye noma kabili ngosuku, senza nsuku zonke ukucubungula, ngosizo izihlahla. Ukunamathela kulezi zeluleko, ungagwema ukususa isikhumba.
Ukuphakama okungekho okuhlinzwayo, ukushisa
Ungathola kanjani isibalo esiphelele ngaphandle kokuqeqesha?
Ukubheka i-Rufa Rufa
Ukwelashwa kwe-Microcurrent, ubuso bokubambisana, isifuba, izintambo
Isikhumba esomile akuwona umusho!
Yini okudingeka ukwazi nge mascara?
Ama-Sauces kuya kuma-saladi: zokupheka zilula (isithombe)
Yikuphi okusanhlamvu okubhekwa njengokuwusizo kakhulu?
Indlela yokwenza isitayela emva kuka-40: imithetho evela ku-Angelina Jolie
I-Sauce kusuka ku-ugqumugqumu
Ama-chips, ingabe kuyingozi empilweni yomuntu?
Ama-pancake amancane ngama-persimmons kanye nembewu ye-poppy
Lezi zibonakaliso ze-zodiac zilindele inhlanhla enhle ngo-Agasti 2017
Uma indoda emva kocansi inganikeli usuku lwesibili
Amakhekhe ngelayisi e-airy nama-marshmallows
Umthombo wemvelo we-vitamin B
Amamodeli wokuziphatha ebuhlotsheni bebhizinisi